EMECHIELA ỤLỌ AKWỤKWỌ NTA NA NKE SEKỌNDỊRỊ NILE DỊ NA STEETI ABIA – hoo!haa!!
EMECHIELA ỤLỌ AKWỤKWỌ NTA NA NKE SEKỌNDỊRỊ NILE DỊ NA STEETI ABIA
N’ihi na-akwụghị ndi nkuzi ụgwọ ọnwa ha, emechiela ụlọ akwụkwọ nta nakwa nke secondary niile dị na steeti Abia.
Ndi nkuzi na steeti ahụ na-ebe akwa arịrị maka na-agbanyeghị enyem aka niile ha si na mba ofesi enweta, tinyere nke gọmenti etiti na-enye, biakwa gbakwunyere ya ego mmachi akpa kwa ọnwa ana-enye steeti ọbụla; gọmenti steeti Abia anaghị akwụ ndi nkuzi ụgwo n’oge nakwa mgbe kwesiri ekwesi.
Akwụghị ụgwọ ọnwaa, ka ndi nkuzi na-ekwụ na ọ ga-emetụta agam n’ihu ụmụ akwụkwọ, kachakwa ndi ka na-ebido ebido.
Ndi nkuzi kwuru na gọọmenti ji ihe kpọrọ mkpa anaghị eji ụgwọ ọnwa ndi nkuzi egwuri egwu.
Ha siri na ọ bụ ihe nwute na-agbanyeghị na gọọmenti na-achị steeti Abia kita akpọghị ụgwọ ọnwa ndi nkuzi mkpa, na ọ na-etekwa kepu kepu ịchịrị gaba n’ihu. N’okwu ha, na mbido, aka na-achi steeti Abia kwere nkwa na ya ga-akwụchapu ndi nkuzi ụgwọ ejibu ha na mbụ, ma na-akwụkwa ha ụgwọ ọnwa na abalị iri abụọ nke ọnwa niile, mana ugbua, otu abụghị n’ezi. Ọ bụ Kọmredi Nelson Nnanna Nwafọ bere akwa arịrị ndia gbasara mmechi emechiri ụlọ akwụkwọ nta nakwa ndi nke sekọndrị n’Abia.
Emechiri ụlọ akwụkwọ ndia site na igba arụkwaghị m nke ndi nkụzi steeti Abia gbara maka ụgwọ ọnwa akwụbeghị ha. Arụkwaghị m a malitere na nkeji tem nke atọ nke agụm akwụkwọ afọa. Gọọmenti ọchịchị steeti Abia, di n’aka Okezie Ikpeazụ enwebeghṅ ike kwụchapụ ụgwọ ọnwa ndi nkuzi eri mgbe ọ malitere ọchịchị.
Ekwuru na gọọmenti Ikpeazụ siri n’aka ndi enyem aka ana-akpọ Paris Refund nweta ego dị njeri naira iri abụọ na otu tinyekwara ego enyem aka ndi ọzọ.
Site na nnyocha ndi ọkacha mara mere, gọọmenti Ikpeazụ bụ nke na-egosi na ya bu agụm akwụkwọ n’obi biazịrị na-akụla bandi agụm akwụkwọ n’Abia azụ. Ikpeazụ, bụkwa onye nkuzi, kweburu nkwa na ya ga emekwa ka agụm akwụkwọ bụrụ ihe okwesịrị ịbụ na steetu Abia, n’ụdị na nwata akwụkwọ nta nwere ike inọ na nkeji nke atọ ma were igwe kọmputa na-akpa ike. Mana ọ dị nwute na nkwa niilea bụ sọsọ okwu ọnụ nke enweghị ike ime eme, nke na mgbe egwu dawazịrị achọpụtala na ọbụghị ihe egwu na-ada ka a na-agba. Achọpụtara na site n’afọ puku abụọ na iri na isii, gọọmenti Ikpeazụ lawara azụ n’ikwụnye ụgwọ ọnwa ndi nkuzi. Otu onye nkuzi sịrị, na o nwere ike kwụọ ụgwọ otu onwa n’ime ọnwa isii.
Otu onye na-atụ egwu maka ichụ ya n’ọrụ sịrị na nwute ya bụ na otu na-ahụ maka ọdị mma ndi ọrụ na steeti ahụ akpọrọ labour union na-atụkwu egwu ikwu okwu maka ajọ ọnọdụa ndi nkuzi steeti Abia no n’ime ya. N’uche ya, aka na-achị yabụ steeti na-amabinye ha ego mmechi ọnụ.
Onye ọgbụgba-amaa kwuru na yabụ ibu ha bu na-anyịgbuzi ha anyịgbu. Ọ sịrị na-agbanyeghị na onweghị ụzọ ọzọ ha si enweta enyem aka ego, na onwere ndi nkuzi akwụbeghị ụgwọ ọnwa rue ọnwa isii.
Onyea beputere anya mmiri n’ihi na ọtụtụ ndi enyem aka onye ọchịchị steeti ahụ na-ebi ndụ okomoko, arụ ụlọ aghara aghara aghara n’Aba nakwa Ụmụahia. Ọ sịrị na ndi enyem akaa na-agbachaa ụgbọ-ala garara ọnụ.
Atụrụ anya na ụmụ akwụkwọ steeti Abia aka bido akwụkwọ n’izu ụka atọ gara aga, mana rukwa kita, ezi agabeghị.
Otu onye isi n’otu ọchịchị PDP gosipụtara obi nwute ya ka ihe gbasara agụm akwụkọ si aga na steeti Abia ma gbakwa ama na ya ji n’aka na akwụbeghị ndi nkuzi ụgwọ ihe karịrị onwa isii na ya bụ steeti.
Mgbe ndi nta akụkọ gbara gọọmenti Abia ajụjụ ọnụ, yabụ gọọmenti kwukwara hoohaa, na eji ndi nkuzi ụgwọ ma kwukwa na aga-emepe ụlọ akwụkwọ ndia mechiri emechi maka arụkwaghị m ndi ịkuzi gbara.
Onye kọmishọna agụm akwụkwọ steeti Abia bụ ichie John Okiyi sịrị na ha na-agbasi mbọ ike ka ha hazie ihe ndia kpatara ndi nkuzi ji gbaa arụkwaghị m.
Previous Post: Mmiri
Next Post: ỤBỌCHỊ BIAFRA NA-ABỊÁ NSO